प्रचण्ड र देउवालाई दुर्गा प्रसाईंको ओपन च्यालेन्ज, उनीहरुकै ठाउँमा गएर चुनाव लड्छु
एक अन्तवार्तामा यदि एमालेको राप्रपासंग चुनावी तालमेल भएन भने एउटै क्षेत्रबाट राजेन्द्र लिङदेनसंग तपाई चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने पश्नमा उनेले भने– ‘राजेन्द्र लिङदनसंग म ? हेत्तेरीका होउ भाई, म शेरबहादुर प्रचण्डको ठाउँमा गएर उनीहरसंगै लड्छु भन्दैछु, राजेन्द्र लिङदेन बिचरा ! राजेन्द्र लिङदेन त नि, राजेन्द्र लिङदेनको ३ नम्बर क्षेत्र होइन ? त्यहा मैले गएर अलिअलि यसो काम गरिदिएको थिए हैन, भनेको २२–२५ करोडको कामहरु गर्देको थिए । त्यहा स्वास्थ्य, शिक्षा मदरसाहरु बनाईदिएको थिए ।
अहिले दुर्गा प्रसाई अब यहाँ चुनाव लड्न आउने भयो भनेर समानुपातिकमा बस्छु भनेर भन्न थालिसक्नु भाको छ ।
हेक्का राखे हन्छ उनी (गगन थापा) नेपाली कांग्रेका महामन्त्री त हुन तर उनलाई मान्छेले पत्याउदैनन् ।